Soosaarka Mashiinka Net Net Shiinaha iyo Warshad | Youte Makiinado
Qeexida Mashiinka Net Net
Waxyaabaha shabaqa beerta: siligga PVC, silig caag ah oo dahaarka leh, wuxuu leeyahay astaamaha u adkaysiga daxalka, muuqaalka quruxda badan, iyo ilaalinta wax ku oolka ah.
Badeecaddu waxay isticmaashaa alaabta ceeriin oo tayo sare leh, waxayna soo martay daaweyn gaar ah oo dusha sare ah, taasoo aad ugu adkaysata daxalka. Shayga la dhammeeyay wuxuu ku raaxeeyaa hubinta tayada toban sano ah.
Si fudud loo rakibo: Looma baahna qalab gaar ah oo loogu talagalay rakibidda alaabada, iyo habka rakibaadda nooca riixista ah ayaa la qaatay, taas oo ay fududahay in la qabto, fudud oo dhakhso leh, isla markaana yaraynaysa kharashyada.
Qaloocinta habboon waxay abuureysaa saameyn bilic leh oo sheygan ah, dusha sarena waxaa lagu daaweeyaa midabbo kala duwan, sida huruud, cagaar, iyo casaan. Isku dhafka midabada kala duwan ee sadarka iyo mesh ayaa xitaa ka sii farxad badan.
Waxay leedahay waxqabadka ka hortagga daxalka, gabowga iyo muuqaalka quruxda badan. Rakibaadda waa mid fudud oo dhakhso leh. Waxaa si weyn loogu isticmaali karaa dayrarka, qurxinta, ilaalinta iyo xarumaha kale ee warshadaha sida warshadaha, beeraha, maamulka degmada, iyo gaadiidka. Waxay leedahay astaamaha saxnaanta sifeynta wanaagsan, xoojinta culeyska sare iyo qiimo jaban.
Hore: mashiinka mesh silig laba geesood ah
Xiga: Mashiinka Mashiinka Yar
Mashiinka Mashiinka Gabion
Mashiinka Gawaarida Gawaarida Gawaarida
Shabakada mesh silig
Mashiinka Xayndaabka siligga siligga
Mashiinka Mashiinka Fiilooyinka